सावधान ! यस्ता मानिससँग भुलेर पनि नगर्नुहोस् दुश्मनी, जसले गर्दा आइपर्छ यस्तो संकट ! – MediaNP
सावधान ! यस्ता मानिससँग भुलेर पनि नगर्नुहोस् दुश्मनी, जसले गर्दा आइपर्छ यस्तो संकट !
MediaNPप्रकाशित मिति: , ०, ००७:१२0
काठमाडौँ । मान्छे न हो केही कुरमा चित्त नबुझेपछि एक अर्कामा दुश्मनी हुन्छ । यसरी यद्यपी कोही व्यक्तिसँगको दुश्मनी यति धेरै कडा हुन्छ जसले जीन्दगी नै बर्बाद पारिदिन्छ । यस्तै भगवानको पालामा पनि एक अर्काको दुश्मनी निकै ठूलो रहेको थियो । ताकी एक अर्काको दुश्मनीमा पाएको सरापको कारण जन्दिगी नै बर्बादीमा फसेको कुराहरु पौराणिक ग्रन्थमा उल्लेख गरेका छन् ।
रमचरित मानसको अरण्यकाण्डमा रावण र मारिचको प्रसंग उल्लेख गरिएको छ । जहाँ गोस्वामी तुलसीदासले ९ प्रकारका मानिससँग दुश्मनी गर्न नहुने र उनीहरुले भनेको कुरा तुरुन्तै मान्नुपर्ने बताएका छन् । गोस्वामी तुलसीदासले नचाहदा नचाहँदै मारीचले रावणको कुरा मान्नु परेको र रावणको आग्रहपछि स्वर्ण मृग बन्नु परेको थियो । जबकी यो कुरा मारीचाई थाहा थियो की उनलाई श्री रामले मार्ने छन् ।
सीतालाई हरण गर्नको लागि रावण मरीच भएको ठाउँमा पुगे । तिमी छल कपट गर्ने स्वर्ण मृग बन । ताकी म सीतालाई हरण गर्न सकू । रावणलाई मारीचले सम्झाउँदै भने तिमी श्रीमरामसँग दुश्मनी नमोल । त्यसपछि मारिचको कुरा सुनेर रिसले क्रोधित भएका रावणले घमण्ड गर्न छोडेनन् । तब मारिचले सोचे सिताको हरण गर्न रावणलाई मद्दत गर्नुमै भलाइ हुनेछ । रावणको हातबाट भन्दा श्रीरामको हातबाट मर्नु उपयुक्त हुन्छ । किनकी रामको हातबाट मर्यो भने आफ्नो सजिलै उद्दार हुन्छ ।
तब मारीच हृदयँ अनुमाना। नवहि बिरोधें नहिं कल्याना।।
सस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी। बैद बंदि कबि भानस गुनी।।
श्लोकमा मारीचको सोचलाई बताइएको छ की कस्ता मानिसले भनेको कुरा तुरुन्तै मान्नु पर्छ । अन्यथा प्राण संकटमा पर्न सक्छ । यस दोहका अनुसरा शस्त्रधारी, हाम्रो रहस्य जान्ने , समर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान व्यक्ति, वैद्य, भाट, कवि र क्रोधी यी मानिसहरुको कुरा तुरुन्त मान्नु पर्छ । यस्ता व्यक्तिको विरोध कहिल्यै गर्नु हुँदैन् । जसले गर्दा प्राण नै संकटमा पर्छ ।
कालोपत्र नभएको भन्दै बौद्ध सडक बन्द
इलाममा चौरमा खेलाडी उत्पादन, चौरमै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता